Kikwete oo ammaanay guulaha dawlad-wanaagga - Sabahionline.com
Kikwete oo ammaanay guulaha dawlad-wanaagga Maarso 09, 2012
Madaxweynaha Tansaaniya Jakaya Kikwete ayaa Arbacadii (7-March) muujiyey horumarka ay dawladdu ka gaartay dhinaca dimuqraaddiyadda iyo dawlad-wanaagga, Daily News ta Tansaaniya ayaa werisay. Qodobbo la xiriira
Kikwete ayaa ku baaqay in laga hortago xaalufinta kaymaha
Kikwete oo ammaanay sida uu barlamaanku u baaray kharashaadka xukuumadda
Kikwete oo magaacabay xeer-ilaaliye guud iyo guddoomiye cusub ee TANESCO
Kikwete oo ka hadlayey Aqalka Madaxtooyada Daaru Salaam isagoo joogay xaflad uu warbixinta horumarka Tansaniya ku guddoonsiinayey Nidaamka is-qiimaynta iyo isla jaan-qaadidda ka dhaxaysa waddamada Afrika (APRM). 21 ka xubnood oo ka socdaa guddi-farsameedkaa ayaa Tansaaniya joogayaan saddex toddobaad si ay dib-ugu-eegaan waxqabadka dhawr hay’adood, waraysiyana ay u sameeyaan. Madaxweynaha ayaa carrabka ku adkeeyey sida ay dawladdu daacad ugu tahay guddiga APRM, iyadoo dhiirri-gelinaysa is-qiimayn Afrika dhexdeeda ah. Tansaaniya ayaa ahayd xubnihii ugu horreeyey ee ku biiray APRM oo iyadu haatan ka kooban 31 ka mid ah 54 ta dal ee Afrika. "Waxaannu leennahay dhawr hay’adood oo u xilsaaran in ay ilaaliyaan dawlad-wanaagga iyo awoodda sharciga, waxaana ka mid ah Xafiiska Xisaabinta Qaranka, Guddida Anshaxa hoggaamiyeyaasha bulshada iyo Guddiga Xuquuqda Aadamiga iyo Dawlad-Wanaagga iyo weliba kuwo kale,” ayuu yiri. Wasiirka Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ah, Bernard Member, ayaa sheegay in ay dawladdu ku bixisay 5.5 bilyan oo shilin ($3.5 milyan) in la isku duwo warbixintan oo la marti-geliyo weftiga APRM. Ma jeclaysatay maqaalkan?